शिष्टाचार पालना गालीमा हुन्छ कि हुँदैन? |
शिष्टाचार पालना गालीमा हुन्छ कि हुँदैन?
प्रकाशित मिति :2016-09-19 15:30:58
ललितपुर । गत शुक्रबारदेखि सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन समाचार माध्यमभरि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नी तथा प्रथम महिला सीता दाहालको शिष्टताको चर्चा प्रमुख विषय बन्यो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तस्बिर सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र अनलाइन समाचारहरुले यसलाई यत्ति भाईरल बनाईदियो कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीको समूहले चित्तबुझदो जवाफ नदिएकोमा एकहप्ता कागजात पेश गर्न काटिएको पत्रलाई नै ओझेलमा पार्‍यो ।
जुन समूहले यस्ता उच्चस्तरको विषयमा विभिन्न तर्कहरु राख्थे । उनीहरु दाहालको शिष्टतामा औंला उठाउँनमै व्यस्त रहे । यसले हाम्रो समाज कस्तो छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । शिष्टता नभएको भनेर उनलाई एउटा निर्जीव वस्तुको रुपमा परिभाषित गरिएको देखियो ।
एउटा हाँसोको पात्रको रुपमा व्याख्या गरियो । यतिसम्मकी उनको चरित्रमा समेत अाैंला उठाएर मनलाग्दी अभिव्यक्ति दिईयो । सीता दाहाल प्रधानमन्त्री पत्नी हुन् । त्यो बाहेक उनी एउटा नपढेकी र यस समाजबाट पुरुष जति समान अधिकार नपाएकी महिला पनि हुन् । जसरी प्रचण्ड एका/एक परिवर्तन भए त्यसरी सीता किन हुन सकिनन् ? हामीले यसरी कहिल्यै सोच्यौ ? शिष्टतामा रहनुपर्छ भनेर तर्क राख्नेले हामीले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री पत्नीको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने ख्याल गरेनौं ।
उनको पनि गल्ती नभएको होइन । उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री पत्नीको हैसियतमा भारत भ्रमण गएकी हुन् । त्यसमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयमा शिष्टाचार महापाल नै हुन्छ । यस्ले विदेशमा कसरी बोल्ने, कता बस्ने, कसरी हिँड्ने सवै सिकाउँछन । त्यसको के काम ? उनीहरुले सिकाएनन् कि ? या सिकाएर पनि उनले पालना गरिनन् ? खोज्नुपर्ने विषय यो हो ।
तर खोजियो सीता कस्की जोई ? यस्ता क्याप्सन सहित फोटो टाँस्न हतारिएका केही शिक्षित युवा जमातबाट सकारात्मक परिवर्तनको आशा कसरी राख्ने ? अझ त्यसलाई मलजल गरेर पक्षमा कमेन्ट गर्ने बुद्घिजीवीको लर्को झनै लामो देखियो । यो तस्बिरलाई सामान्य मान्न आग्रहसहित केहीबेरपछि प्रथम महिला सीता दाहालको पक्षमा तस्बिर राखियो जसमा अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामा पत्नी मिचेल ओबामा, बेलायतका राजकुमार विलियम्स पत्नी केट मिडल्टन भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै छेउमा उभिएका थिए । तर त्यस्ता शिष्टाचारीको अगाडी झन मसला बन्यो र कुतर्क पेश गर्न थाले । ‘हामी नेपाली हौं । उनीहरुसँग तुलना गर्न सुहाउँदैन’ आदी इत्यादी ’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पत्नी अर्थात प्रथम महिला सीता दाहालकोे हिँडाई र बसाईलाई यती तल्लो स्तरको भाषाले गाली गर्न पछि नपर्ने हाम्रो समाजले फेरि पनि शिष्टता भएन भनेर आलोचना गर्छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा हाम्रो सोचाईको स्तर कति फराकिलो छ भनेर भनिराख्नुपर्ने जरुरी देख्दिन म ।
प्रधानमन्त्री पत्नीलाई यस्तो गाली गर्न सक्ने समाजले हाम्रा आमा, दिदीबहिनी र भाउजु बुहारीलाई के गर्छन् ? प्रधानमन्त्री पत्नि सामाजिक सञ्जालमा आएको आफू विरुद्धको कुतर्कप्रति जानकार छन् छैनन् त्यो फरक कुरा हो । तर परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीले यस कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।